Dawladda Hoose Ee Degmada Boorama Oo Dhagax Dhigtay Waddooyin - Xogside-news
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Dawladda Hoose Ee Degmada Boorama Oo Dhagax Dhigtay Waddooyin
Dawladda hoose ee degmada Boorama ayaa maanta dhagax dhigtay labo waddo oo isku xidhi doona xaafadaha kala duwan ee degmadaasi.
Waddooyinkan ayaa isku xidhi doona qaybaha kala duwan ee magaalada, waxaana ay kala yihiin waddo isku xidhi doonta xaafadda Harawe iyo dugsiga sare ee Sheekh Aadan Isaaq, taasoo cabbirkeedu yahay 1 Kiilomitir iyo 200 oo tallaabo. Waddada kale ayaa Iyana isku xidhi doonta xaafadda Sheekh Cali iyo Dhammuug, taasoo iyadna cabbirkeedu dhan yahay 1 kiilomitir. Maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama ayaa sheegay in waddooyinkan loogu talo galay inay wax ka taraan bilicda magaalada iyo isku socodka gaadiidka iyo dadka.
Waxaana ugu horreyn goobtaasi ka hadlay Injineer Maxamed Cawil Sheekh Faarax oo ka tirsan dawladda hoose ee degmada Boorama, waxaana uu sheegay inay hubin doonaan isla markaana ay tayaynayaan waddooyinkaasi, si muddo dheer loo adeegsado, waxaana uu intaas raaciyay in sida ugu dhakhsaha badan loo hirgelin doono waddooyinkaasi. Waddooyinkan ayaa qandaraaskooda ay heleen shirkaadaha Mabaani iyo Samatar, kuwaasoo dhisi doona waddooyinkaasi.
Xoghayaha fulinta ee dawladda hoose ee degmada Boorama Cabdillaahi Xasan Raage (Cudad) ayaa ugu baaqay bulshada inay banneeyaan waddooyinka la dhisayo hareerahooda, si ay u fududaato in si dhakhso ah loogu dhiso waddooyinkaasi, isagoo sheegay in waddooyinkani ay waxtar weyn u leeyihiin dadka ku dhaqan xaafaha ay marayaan.
Maayarka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame oo isna goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay shirkadaha dhisaya waddooyinkaasi inay qaranka iyo bulshada ay u dhisaan waddooyin cimri dheer leh, kuwaasoo ay bulshadu adeegsato muddo dheer, waxaana uu xusay in hubin iyo dabogal ay ku samaynayaan waddooyinka ay dhisaan shirkadahaasi, oo ay tayadooda ay eegi doonaan.
Injineer Cabdikariin Maxamed Xasan iyo Injineer Mustafe Axmed Cilmi oo ku hadlaayay afka shirkadaha ku guuleystay qandaraaska waddooyinkaasi ayaa shpeegay in qaranka iyo bulshada ay u dhisi doonaan waddooyin aayatiin leh, isla markaana ay ku dedaalayaan sidii ay u gaadhsiin lahaayeen waddooyinkaasi Standarka laga rabo.
Dadweynaha ku dhaqan xaafadaha ay marayso waddooyinkaasi ayaa uga mahadceliyay dawladda hoose ee degmada Boorama, adeegga waddooyinka ee ay soo gaadhsiiyeen, waxaana ay ballanqaadeen inay illaashan doonaan waddooyinkaas.
Previous articlexikmadda qiimaynta noolaha
Next articleXaflad Lagu Daahfurayay Sanduuqa Daryeelka Macalimiinta Oo Lagu Qabtay Gebilay